Igumbi lakho lokulala e intente sinombuki zindwendwe onguShash
EcoTourism - Le ntente yenye yeentente ezine 2-3 abantu. Ibekwe kwindawo yembali yaseMitchell Butte. Isafikeleleka kuyo yonke ipaseji yabakhenkethi kodwa yendalo ngokwaneleyo ukonwabela isibhakabhaka esinzulu, akukho lungcoliseko lokukhanya kunye nemikhosi yasekhaya yaseNavajo.
Sithi KUPHELA uluhlu olunombono we-360 we-14 Monuments. Ukumisa ngokupheleleyo kwaye kuxhotyiswe intente yeentente kunye neZero Waste Principles.
~ Qasha iNtili yeSikhumbuzo sentente
Cebisa ukuba iiNdawo zeNavajo azinambane okanye amanzi abalekayo. Njengendawo yakudala ebukekayo yokukhempisha sinokunikezela ngeshawari kuphela ehlotyeni. Amaqondo obushushu angaphantsi kwama-32° kwishawari ayinakunikwa njengoko amanzi engumkhenkce.
Ezi ntente zinomgama woluntu obandakanyiwe kuyilo.
Ungazivalela kwindalo, ngeembono ze-360 degree ze-14 Monuments, kwicala leMystery Valley ye-Tribal Park.
I-Fie Kiosk ingaphantsi kweekhilomitha ezi-3, kwaye kutheni uhlala kwindawo, sele uhlawule kwaye unokuzibona?
Sise-Oljato Community Side, ngaphakathi kwe-Tribal Park, ngaphandle kwendawo "yentlawulo", kwaye akukho ndawo enye inombono onjengeyethu. Sisecaleni kweZiko loKwamkeleka.
Indlela yethu ikumgangatho ophantsi kufutshane nendlela egangathiweyo kunye nesembindini, ukuze usindise isithuthi sakho kunyanzeliso, kwaye ufumane amava aphezulu kunye nexesha leeyure ezingama-24.
Iindwendwe zethu zibona kakhulu.
Sibekwe embindini, imizuzu nje embalwa ukuya kwiVenkile yokutya yaseGoulding kunye neSikhululo seGesi. I-deli inejusi kunye nebha yekofu kunye nokutya okushushu okuhambayo.
Kwaye nje imizuzu embalwa ukuya kwi-Tribal Park Fee Booth.
Umbuki zindwendwe ngu- Shash
Senza imisebenzi yasekhaya, ke sikhuthaza iindwendwe ukuba ziphumle kwaye zingayicingi le nto njenge-starbucks. Nika umninimzi ixesha lokujonga imiba yakho, kwaye sikwakwiXesha laseIndiya, ke yonke into elapha iphumle kakhulu. Yakhiwe kodwa ikhululekile. Nceda usazise ukuba kukho into esinokukunceda ngayo kwindawo.
Senza imisebenzi yasekhaya, ke sikhuthaza iindwendwe ukuba ziphumle kwaye zingayicingi le nto njenge-starbucks. Nika umninimzi ixesha lokujonga imiba yakho, kwaye sikwakwiXesha las…